08 Apr, 2021 - 13:04 2021-04-08T13:34:29+00:00 2021-04-08T13:34:29+00:00 0 Views
MAKADII? Ndinodawo mukomana ane makore 24 – 40, ndiri positive. Nhare yangu 0784 583 483.
Makadini? Ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20. Nhare yangu 0777 618 184.
Ndine makore 19, ndodawo musikana ane makore 18 – 19, akanaka. Ndoshanda anoda ngaandibate pa0774 125 899.
Ndinotsvagawo mudzimai wekufambidzana naye ane mwana kana asina ane makore 28 – 34. Ndine makore 46, HIV negative. Ngaave anobva Chimanimani, Nyanga neMutare. Ndine vana vatatu, nhare yangu 0771 228 059.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 45, ndiri pamushonga uye murume ndoda ane makore 50 kana kudarika. Andida anondibata pa0771 508 012.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23 uye ndinodawo musikana ane makore 18 kana 19 ari serious nekut ini ndiri serious. Nhare yangu 0786 329 317.
Ndiri mukadzi ane makore 38, ndogara muHarare uye ndiri HIV Negative. Ndodawo murume ane makore 39 zvichikwira, asina mukadzi, ari muHarare. Ndibatei pa0782 387 571.
Ndiri mudzimai ane makore 43 nemwana 1 ndotsvakawo murume anoda zvemba kwete matsotsi. Nhare yangu 0783 955 773.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 42, ndine vana 2 uye ndinoita zvemining nefarming irrigation. Ndinotsvagawo mudzimai anofarirawo mabasa angu andinoita anonamata ane makore 30 kusvika 40. Ngaave ane rudo ari negative asi veMasvingo kwete. Vanoda tumirai sms pa0716 256 257 nekuti kwandinoshandira network inonetsa.
Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 21 ave kuda zvemba, anonamata uye ari pachokwadi. Asina chirwere nhamba dzangu 0716 065 996.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 24 nemwana 1, ndinotsvaga murume ane makore 28 kusvika 34. Ngaave ari pamushonga, nhare dzangu 0713 439 603.
Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvaga musikana anoda kuroorwa ane makore 25 zvichidzika asiri pamushonga. Nhare yangu 0777 729 252.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 27, ndotsvakawo mukadzi ari pachokwadi asiri pamushonga. Ndobatika pa0785 537 170.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 40 nevana vaviri. Ndinotsvagawo murume wekuroorana naye ane makore 42 kusvika 48 ane vana vaviri kana vatatu uye anonamata. Vakasununguka ndibatei pa0771 122 070.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana mumwe chete uye ndinotsvagawo murume ane makore 30 kusvika 40 ane vana vaviri kana 1. Ngaave asiri pamushonga uye anoshanda, vakaroora musaedza zvenyu. Andifarira anondibata pa0784 726 942.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 32 nemwana 1 uye ndinodawo mukadzi kana asati ambowanikwa. Anoda zvemusha ngaandibate pa0782 829 776 totaura.
Ini ndiri mukadzi ane makore 21 nevana vaviri uye ndinotsvagawo murume anondiroora ane vana vakewo. Nhare yangu 0714 317 155.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 2 uye ndogara muHarare. Ndinoda murume ari serious ane makore 39 – 46 asina mukadzi uye ari HIV negative. Ndibatei pa0782 387 571.
Ndinotsvagawo musikana wekuroora, ndiri mukomana ane makore 26. Ndiri pamushonga, nhare yangu 0782 052 579.
Ini ndiri mudzimai ane makore 52 okuberekwa, ndine vana vaviri uye ndinotsvaga murume ane makore 49 zvichikwira ari HIV positive. Ngaafone pa0783 195 238.
Ndiri mukomana ane makore 19, ndiri Form 5 uye ndinotsvagawo shamwari dzechisikana (penpals) dzekutaura nadzo. Vane makore ari pasi pe18 vanoda ndibatei pa0778 076 057.
Makadii? Ndine makore 21 nemwana 1, ndogara kuMt Darwin uye ndinodawo murume ane makore 23 kusvika 32. Ngaave anoshanda asina mukadzi, asina chirwere uye asinganwi doro. Nhare yangu 0778 082 945.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinodawo musikana ane makore 18 – 24 asi ngaave munaku. Asina chirwere ngaandibate panhamba dzangu dzinoti 0715 586 304.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 2 uye ndiri HIV negative. Ndiri muHarare ndinodawo murume ane makore 40 – 48 ari pachokwadi, asina mukadzi. Ndibatei pa0733 568 234.
Kazuwai vadikani, ini ndiri murume ane makore 28. Ndinotsvagawo shamwarikadzi wekuva naye muwanano ari pazera 18 kusvika 25. Andidawo ngaandibate pa0774 946 302. Ndiri muHarare.
Makadii Kwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27 paupenyu ndiri driver uye ndinotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 23 asina mwana asina neHIV. Ndobatika pa0714 248 355.
Makadii? Vese vaifona pa0783 801 608 chiregai kufona. Ndakawana wangu wandaida.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20, asi ari pamushonga kwete. Andifarira ngaandibate pa0772 756 838.
Ndiri murume ane makore 33 nemwana 1. Ndinoda mukadzi ane mwana 1 kana 2 ari pachokwadi. Ini ndinogara muHarare, andifarira ngaandibate pa0771 182 748.
Makasimba here veKwayedza? Ndotsvagawo mudzimai ane makore 18 kusvika 28. Ndobatika pa0783 010 466.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 39. Ndodawo mudzimai ane mwana mumwe ane makore 32 kusvika 35 ane magadziko mahombe. Ngaave anofarira kumusha, andifarira ngaandibate pa0718 960 247.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi wemakore 32 nevana 2. Ndiri pamushonga uye ndodawo murume ari pachokwadi wekumisa imba naye. Vanoda kutamba kwete, kana pane andifarira totaura chero nguva pa0776 018 879. Ndatenda.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvagawo shamwarikadzi ine makore 22 kusvika 30. Ngaave ari HIV+ seniwo asingaratidzike. Nhare yangu 0716 262 369.
Makaita basa veTishamwaridzane, ndakazomuwana wandaida saka vose vachiri kufona panhamba idzi 0779 015 163 ngavachirega ndakazomuwana.
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane vana 3 uye ndiri pamushonga. Ndine makore 33, ari pachokwadi ngaandibate pa0715 854 658. Asi matsotsi kwete ndapota zvangu nevarume vevanhu kwete.
Makadini veTishamwaridzane? Ndotsvagawo shamwari yechirume ine makore 50 zvichikwira. Ini ndine makore 40 nevana 2 vane misha yavo. Vandifarira ndibatei pa0784 010 622.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 23 uye ndinotsvagawo mukomana ari pachokwadi ave kuda zvemba nhamba dzangu 0785 278 308.
Makadiiko? Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye. Ndatenda, nhare yangu 0714 729 425.
Makadini zvenyu? Ini ndine makore 25, ndinotsvakawo musikana akanaka ane makore 18 kusvika 22. Kana pane andida anondibata pa0715 481 745, ndiri kuBulawayo.
Ini ndiri mukomana ane makore 26, ndotsvagawo musikana ane makore 19 kusvika 23 wekuroora asiri pamushonga. Nhamba dzangu 0719 239 961, ndogara muHarare.
Ndiri murume ane makore 38 nevana vakewo. Ndotsvaga mukadzi ave kuda zvemusha ari muHarare kana pedyo. Ndinoda anonamata, ane mhuri yakewo ari HIV negative. Ngaandibate pa0712 394 264.
Ndiri murume ane makore 41, ndotsvaga mudzimai wekuroora. Andifarira nhamba dzangu 0771 858 047. Zvizhinji totaura pafoni.
Makadiniko? Ndiri murume ane makore 34, handisi pamushonga. Ndinoda mukadzi asiri pamushonga chete ane makore 19 – 31. Nhare yangu 0772 298 392.
Makadii veKwayedza? Ndinokutendai nechirongwa chenyu cheTishamwaridzane. Ndotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana, ndine makore 51. Anoda ngaandibate pa0773 942 684.
Makadini vabiki vechirongwa? Ndinotsvagawo mudzimai wekushamwaridzana naye ane zvaanoita muhupenyu. Ngaave ane makore 35 zvichidzika uye ari HIV negative. Anondibata pa0779 276 530.
Ndiri murume ane makore makumi matatu nematatu. Ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora ari pakati pemakore 25 kusvika 30. Nhare yangu 0785 922 028.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 41 ekuberekwa nevana vatatu. Ndodawo mukadzi wekugara naye, anoda zvemba uye anoziva Mwari. Vanoda ndibatei pa0774 364 502.
Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika. Ndinozvishandira uye ndowanikwa pa0777 909 551. Zvimwe totaura.
Ndiri murume ane makore 36, ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye ane makore 18 zvichikwira. Nhare yangu 0716 339 112.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana wokuroora ane makore 23 – 22. Nhamba dzangu 0779 170 043.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 35 uye ndiri pamushonga. Ndotsvakawo mukadzi wekuroora ane makore 25 – 30, andida ngaandibate pa0784 798 070.
Makadii? Ndiri musikana mutsvuku ane makore 21 uye ndinotsvagawo mukomana akanaka pachiso nemwoyo. Ngaave anoshanda anoda zveimba nenzira yemuchato, akati rebei nekuti ini ndiri murefu. Ndinoda ari muHarare, varume vevanhu ndapota handidi. Ari pachokwadi ndibate pa0785 476 219.
Ndiri murume ane makore 35 nevana vatatu, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 33 zvichidzika. Ngaave ane vana ari HIV negative, andifarira anondibata pa0785 264 764 chero nguva.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 20, ndinotsvagawo musikana ane makore 19 – 24. Nhamba dzangu 0713 336 943.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37, ndinodawo musikana ari pamushonga asingataridze. Ndibatei pa0772 940 346.
Tishamwaridzane14 Oct, 2021
Tishamwaridzane07 Oct, 2021
Tishamwaridzane23 Sep, 2021